Daadmadheedh - Wikipedia
To in SomalilandTemplate:SHORTDESC:To in Somaliland
Fadlan dib u habayn ku samee bogan, una qor si waafaqsan sharciga Wikipedia, hadii kale waa la tirtiri doona.
Daadmadheedh waa gobol ka tirsan GoboladaSomaliland, waxaana uu Gobolnimada qaatay sannadkii 2008. Waxaana uu ka mid yahay goboladii cusbaa ee Madaxweynaha Somaliland Daahir Rayaale Kaahin uu ku kordhiyay sannadkii 2008. Magaalo Madaxda Gobolka Daadmadheedh waa Degmada Oodweyne oo degmonimada qaadatay sannadkiu 1962.
Daadmadheedh waxa xad la wadaagaa gobollada Togdheer, Saaxil, Maroodi Jeex iyo Gobolka Jarar ee Itoobiya.
Gobolka Daadmadheedh waxa uu ku fadhiyaa cabbir aad u balaadhan, waxaana hoos yimaada 64 tuulo. waxa uu caan ku yahay xoolaha nool iyo beeraha, waxa mara ilaa 7 doox kuwaas oo ay dadku uga faaiidaystaan beeraha.
The Somalia countryside.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Daadmadheedh&oldid=212157"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 1 Juun 2021, marka ee eheed 16:57.